PaySketch: Nchịkọta PayPal na Akuko | Martech Zone
Anyị nwere ụfọdụ ndị ọrụ ibe gị na ụlọ ọrụ na-eji PayPal maka azụmahịa ha niile. Kwụ Paygwọ gateways na processors tinye nnọọ a bit nke ụgwọ na azụmahịa, ya mere PayPal bụ ụzọ dị mfe, ntụkwasị obi ịnakọta ụgwọ na ndenye aha, nbudata, na ịkwụ ụgwọ ndị ọzọ. Nke ahụ kwuru, interface PayPal abụghị nke kachasị mfe ịnyagharịa - yabụ ịnweta ngwa ọgụgụ isi azụmaahịa nke nwere ike inyere gị aka inyocha, nyochaa, ịnakọta ma soro ndị ahịa gị nwee mmekọrịta nwere ike inye gị nnukwu uru.
Chika Okpala na-enye ọnụ ọgụgụ isi azụmahịa desktọọpụ ngwa na-enyere gị aka jikwaa na nyochaa azụmahịa gị kama PayPal si interface nke n'ezie na-enye nghọta n'ime azụmahịa. PaySketch na-enye echiche zuru ezu nke akaụntụ gị yana dashboard a kapịrị ọnụ maka azụmahịa, ahịa, ịkwụ ụgwọ, ndị ahịa, ngwaahịa na mkpesa.
Enwere uru atọ dị na PaySketch:
Analytics - PaySketch na-enye ezigbo oge nchịkọta PayPal na nghọta, amụma na usoro nyocha iji nyere gị aka nyochaa ma melite azụmahịa gị.
akuko - Nzacha, chọọ, lelee ma budata azụmahịa PayPal ozugbo. Lelee ma dekọọ akụkọ banyere ahịa, ngwaahịa na / ma ọ bụ ndị ahịa.
Njikwa Akaụntụ - Sochie azụmahịa, lelee nhazi akaụntụ gị, nkwụghachi usoro na zipu ego.
PayPal ịkwụ ụgwọ
Tags: ndị ahịa paypaldashboard paypalpaypal ịkwụ ụgwọpaypal ngwaahịapaypal akukoakụkọ paypalpaypal ahịantụgharị paypalego akwụ ụgwọ
Sep 7, 2014 na 3:13 PM
Daalụ maka ego Douglas. Paysketch yiri ka ọ bara uru ma na-atọ ụtọ. Aga m anwale ya.